समाजसेवा गर्दा गाली खाएपछि कञ्चनसंगै धरधरी रोइन् दीक्षा चापागाई (भिडियोसहित) — Motivate News
समाजसेवा गर्दा गाली खाएपछि कञ्चनसंगै धरधरी रोइन् दीक्षा चापागाई (भिडियोसहित)
Posted on November 23, 2016 by motivate news
मङ्सिर ८, काठमाडौं – कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘सुमनसँग’ कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिएर विवादमा तानिएकी कञ्चन शर्मा रेग्मीले पहिलोपटक मुख खोलेकी छन् । मञ्जाको टिभीमा पत्रकार उत्सव रसायलीसँग कुरा गर्दै उनले आफूले कुनै झुट नबोलेको दाबी गरेकी छन् । र, कञ्चनलाई उद्दार गर्ने पवित्र नेपाल समाजकी अध्यक्ष दीक्षा चापागाईले ‘छोराले फालेको आमालाई मैले उठाउन नमिल्ने, लोग्नेले श्रीमतीलाई फाल्न हुने फालेपनि मैले सम्हाल्न नपाउने’ भन्दै आसु झारेर रोएकी छन् ।
यस्ता छन् पत्रकार उत्सवले कञ्चन र दीक्षालाई सोधेका प्रश्नः
तपाईले झुट बोलेकै हो ?
मैले झुट बोल्नुपर्ने कुनैपनि आवश्यकता देख्दिन् । मैले भोगेका कुराहरु मैले सत्यतथ्य बोलेको छु ।
सुमनसँग भन्ने कार्यक्रममा कविता वाचन गर्नभएको छ । उहाँ९सुमन खरेल०ले भन्नुभाथ्यो तपाईले लेखेको कविता सुनाइदिनुस् त भन्दाखेरी जून कविता वाचन गर्नुभाथ्यो त्यो तपाई आफैले लेख्नुभाथ्यो ?
मैले आफैले लेखेको होइन् ।
तपाईले जून श्रीमान र छोराको बारेमा भन्नुभाछ ती कुरा सत्य होइनन् भन्छन् के कुरा खास ?
मैले आफैले जन्माएको जेठो छोरा कान्छो छोरा, मेरो श्रीमानले मलाई सडकमा फ्याक्नुभो । सडकमा फ्याकेकी स्वास्नीको उहाँले कहिले प्रशंसा गर्नुपनि हुन्न् गर्न आवश्यकता पनि छैन् ।
कुरा सुन्नेहरुले चाँहि के भन्छन् के दीक्षा चापागाईले सिकाएर बोलेको भन्छन् ?
म बच्चा होइन् म सानो तोतेबेली बोल्ने बच्चा होइन् । म पनि एउटा ४५ वर्षको महिला हो ।
अनि तपाईले डिभोर्स ९सम्बन्ध विच्छेद० दिइसक्नु भएको रहेछन नि उहाँलाई ?
मैलै डिभोर्स दिए भन्नुहुन्छ । मैले डिभोर्स दिएको भए मैले एउटा प्रतिलिपी त पाउँछु बाबु । फोटोकपी त पाउछु नी । खैत दिनु न भन्दा नदिने । का, कतिखेर, कुन अवस्थामा मैले हस्ताक्षर नगरी त डिभोर्स हुँदैन् ।
अनि तपाईले छोरा त्यही बाटो टक्कसन गाडी चढेर जान्थ्यो तर, बाबु भन्दा बोल्दैनथ्यो भन्ने कुरा भन्नुभयो यो पनि सत्य हो ?
एकदम सत्य कुरा हो ।
तपाई धुम्रपान सेवन गर्नुहुन्थ्यो रे १ मध्यपानको नशामा पस्नुहुन्थ्यो रे १ यो कुरा सत्य हो ?
धुम्रपान त म गर्थे । अहिले पनि गर्छु । मलाई मध्यपान गर्न सिकाउने मेरै श्रीमान हो मोहन रेग्मी । मलाई कम्पनी देउ- कम्पनी देउ भन्ने सँगै बसेर खान्थ्यौ श्रीमान श्रीमती ।
कञ्चन रेग्मीको मानसिक अवस्था नै ठिक नभएर यी झुटा कुराहरु भन्यो भन्छन् नी के भन्नुहुन्छ तपाई ?
मेरो सर्टिफिकेटै त उहाँले च्यातिदिनुभयो । उहाँले घरमा नागरिकता समेत च्यातिदिनुभयो । मैले के नै ल्याएर जून कपडामा मलाई घरबाट निकालिदिएको थियो त्यो भन्दा मसँग केही पनि थिएन् ।
तपाईले क ञ्चनलाई बोल्न सिकाएर डलर खेती गर्नभो भन्ने आरोप छ नि ?
दीक्षा रुँदै भन्छिन् ‘छोराले फालेको आमालाई मैले उठाउन नमिल्ने, लोग्नेले श्रीमतीलाई फाल्न हुने फालेपनि मैले सम्हाल्न नपाउने ।
Posted in भिडियो, मुख्य समाचार, समाज | Tagged Kanchan Sharma, Kanchan Sharma Regmi, कन्चन शर्मा, कन्चन शर्मा रेग्मी, दिक्षा चापागाई | Leaveareply